Fiofanana latheman mpanelanelana
Tamin'ny 29 septambra 2020, mifanaraka amin'ny fifanarahana fiofanana momba ny fiofanana momba ny asa aman-draharaha sy drafitra fanofanana, mpiasa miisa 320 amin'ny orinasanay no nandray anjara tamin'ny kilasy fanofanana antonony ho an'ny latheman karakarain'ny Birao Mpiaro ny Zon'olombelona Rudong County sy ny Fiarovana ara-tsosialy ary ny Rudong County Huayi Vocational T .. .
Ny fivorian'ny birao filoham-pirenena ho an'ny varotra ao amin'ny faritany Rudong dia natao tao amin'ny orinasanay
Tamin'ny 7 aogositra 2020, ny fivorian'ny birao filoham-pirenena Rudong County Chambre du Commerce faharoa (nitarina) dia natao tao amin'ny efitrano fihaonambe tao amin'ny rihana faharoa an'ny orinasanay. Nisy solontena mihoatra ny 30 nanatrika ny fivoriana, avy amin'ny fari-piainana rehetra ao amin'ny County Rudong. Ny mpiara-dia Ma Dongbo, depu ...
Ny seminera fifanakalozam-pahalalana momba ny taona 2020 an'ny Sampana Indostrian'ny Electroplating ao amin'ny federasiona fiarovana ny tontolo iainana ao amin'ny distrikan'i Rudong dia natao tao amin'ny RUDONG CHAIN ​​WORKS
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-07-26
Tamin'ny 26 Jolay 2020, ny seminera fifanakalozana fianarana 2020 an'ny Sampana Indostrialy Elektronaly ao amin'ny federasiona fiarovana ny tontolo iainana ao amin'ny Fanjakan'ny Rudong dia natao tao amin'ny efitrano fihaonambe tao amin'ny rihana faharoa amin'ny tranon'ny vahininay. Solontena 20 mahery no nanatrika io fivoriana io. Talohan'ny fihaonambe, ny ...
Fitaterana milina rojom-bolo, G80 firaka vy fitaterana fanandratana rojo, Tantely mpampitohy vy ho an'ny Sewag, Rohy fohy an'ny ranomasina, G80 Fantsom-pifandraisana amina rojo 80 firaka rojo, Fangarony vy rojo,